Macluumaadka Culeyska iyo Macluumaadka | Martech Zone
Macluumaadka Culeyska iyo Macluumaadka
Maalin kasta waxaan dib u eegeynaa digniintayada Biyaha dhalaalay, ama kafaala-qaadaya, oo dib u eegis ku sameeya daraasiin ku saabsan suuq-geynta laxiriirta suuq-geynta ee shabakadda. Toddobaad kasta waxaan doorannaa inaanan daabicin boqolaal sawir-gacmeedyo, in kastoo. Waxaan horumarineynaa iskudhafmeedka nafteena mana ahan inaan nahay kuwa caqli-gal ah… waa si fudud inaan fahano waxa ka dhigaya inay shaqadu noqoto mid shaqeynaya iyo wixii aan sameynayn.
Qeexid sifiican loo qaabeeyey oo aan lahayn macluumaad dheeraad ah waxay leedahay waxyaabaha soo socda:
Sheeko Xiiso Leh - gebi ahaanba, waa inuu jiraa mawduuc ku saabsan ururinta xogta iyo sawirada. (Eeg Ka-hortagga Jebinta Guryaha in la bilaabay agagaarka Halloween)
Taageerida Cilmi baarista - si loo xaqiijiyo sheekada, waxaa muhiim ah in joornaalada 'infographics' ay leeyihiin tixraacyo ku saabsan baaritaanka qeybta saddexaad. (Eeg Imtixaanka Dhibcaha Lead)
Gunaanad - hordhaca had iyo jeer waa wax weyn, laakiin gabagabadu waa waajib. Sidee ayaad saameyn ugu yeelan doontaa qof adiga oo aan dhab ahaan u wadin xogta iyo sheekada gabagabada? (Eeg Sidee Barnaamijka Maareynta Soo-jeedinta uu u kobcinayaa Ganacsiga)
Aqoonsiga - yaa tahay maxaadse maamul ugu tahay mowduucan? Waad la yaabi doontaa inta sawir ee aan dib u eegay ee aad u fiican… laakiin aan haysan wax macno ah oo lagu garto isha. (Eeg Sida Loo Dhiso Xarun Xog)
Wax-U-Yeedid - Dhawaan waxaan ku dhaleeceeyay shirkad la'aanta CTA ee ku saabsan qaab-hawleedkooda. Waxay yiraahdeen ma doonayaan inay la kulmaan sidii iib ah. Marnaba ma dhihin in la iibiyo… Waxaan kaliya u sheegay inay u sheegaan booqdaha waxa xiga ee uu sameynayo. (Eeg Kiiska Ganacsiga ee Maareynta Hantida Dijital ah)
Infographics aad u tiro badan ayaa kaliya ku soo koobaya farabadan stats cajiib ah qaab quruxsan. Natiijadu waxay tahay macluumaad dheeraad ah. Dadku way lumaan oo waxay ku jahwareeraan xogta halkii ay ka heli lahaayeen infographic waxbarista akhristaha waxa ujeedka ka dambeeya in loo adeegsado macluumaadka la adeegsado.
Waxaa jira waxyaabo ka reeban, dabcan, sida cajiib faahfaahinta (hubi annaga Hay'ad Jacayl iyo Guur iyo Maxay Tahay Sababta Ay Dadku Uga Reebayaan Twitterka) ama talaabo talaabo infographics (hubi 10 Talaabo oo lagu maareeyo Isgaarsiinta Dhibaatada).
Tags: infographictusaalooyinka infographicmacluumaad dheeraad ah
Siyaabaha Smart ee loogu daro SEO Suuq geynta Mawduuca